प्रौद्योगिकी Archives - khabarbox.com.npkhabarbox.com.np
कम्प्युटर स्लो अनि ह्याङ भयो ? यसरी समाधान गर्नुहोस्
Posted On June 9, 2020 Author siteadmin Category प्रौद्योगिकी, शिक्षा.
काठमाडौं । तपाईं नियमित रुपमा कम्प्युटर अथवा ल्यापटप चलाउनुहुन्छ भने पक्कै पनि स्लो तथा ह्याङ हुने समस्या बेहोरेकै हुनुपर्छ । लकडाउनको अहिलेको समयमा घरबाटै काम गर्नुपर्दा यो समस्याले अझ सताएको हुनसक्छ । कम्प्युटरमा देखिने सामान्य किसिमका समस्या समाधानका लागि समेत सर्भिस सेन्टरमा देखाउन पुग्ने कतिपयको बानी हुन्छ । थोरै जानकारी राख्ने हो भने कतिपय त्यस्ता… Read more »
Posted On January 16, 2018 Author siteadmin Category प्रौद्योगिकी.
काठमाडौं। सामाजिक सञ्जालको दुनियाँमा एकछत्र राज गर्दै आएको फेसबुक अहिले अनेक आलोचनाको शिकार बन्दै आएको छ। विशेषगरि अमेरिकी चुनाव तथा त्यससँगै संसारभर विभिन्न अफवाह फैलाउने तथा फेक न्यूजको प्रसार बढाउने कुरामा फेसबुकको प्रयोग बढ्दै जाँदा यो प्लेटफर्मको संसारभर आलोचना भयो। आफ्नो बारेमा संसारभर भइरहेका आोलचनाको बारेमा फेसबुक जानकार नै थियो। उसले यो कुरा वाहिर ल्याउने… Read more »
ठेचोमा सम्पन बाजा प्रशिश्रण कार्यक्रम
Posted On May 28, 2017 Author siteadmin Category कला, प्रौद्योगिकी, सामाजिक.
ठेचोमा सम्पन बाजा प्रशिश्रण कार्यक्रम को केहि झलक हरु ठेचोमा सम्पन बाजा प्रसिशन कार्यक्रम को केहि झलक हरु ठेचोमा सम्पन बाजा प्रसिशन कार्यक्रम को केहि झलक हरु
भैसेपती तलिम केन्द्र को सहयोग बाट सन्चलित तलिमका झालक हरु ।
Posted On May 27, 2017 Author siteadmin Category प्रौद्योगिकी, रोज्गार, सामाजिक.
भैसेपती तलिम केन्द्र को सहयोग बाट सन्चलित चौ तलिमका झालक हरु । भैसेपती तलिम केन्द्र को सहयोग बाट सन्चलित चौ तलिमका झालक हरु । भैसेपती तलिम केन्द्र को सहयोग बाट सन्चलित चौ तलिमका झालक हरु ।
Posted On January 5, 2017 Author siteadmin Category प्रौद्योगिकी, सामाजिक.
काठमाडौं– यातायात व्यवस्था अञ्चल कार्यालय बागमती एकान्तकुनाले गाडीको लाइसेन्सका लागि लिँदै आएको प्रयाेगात्मक(ट्रायल) परीक्षाको ढाँचा परिवर्तत गरेको छ। यसअघि अंग्रेजी अङ्ककाे आठ ‘8’ आकारको वृत्तबाट शुरु भई यु (U) घुम्ती, उकालो र टी(T) पार्किङमा अन्त्य हुने गरेको थियो। अब नयाँ ढाँचा अनुसार टी (T) पार्किङबाट ट्रायल शुरु हुने र अन्य ढाँचा यथावत रहने कार्यालयका प्रमुख… Read more »
UNDP सहयोगमा जल तथा मौसम विभागले आजदेखी तीन दिने मौसम पुर्वानुमान सेवाको सुरुवात
Posted On September 9, 2016 Author siteadmin Category प्रौद्योगिकी, सामाजिक.
युएनडिपी नेपालको सहयोगमा जल तथा मौसम विज्ञान विभागले आजदेखी तीन दिने मौसम पुर्वानुमान सेवाको सुरुवात गरेको छ। जनसङ्ख्या तथा वातावरण मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा जनसङ्ख्या तथा वातावरण मन्त्री श्री जयदेव जोशी ज्यूले उक्त सेवाको सुरुवात गर्नुभयो। सो सेवा सुरु भए पश्चात सर्वधारणले प्रत्येक घण्टा गरि तीन दिन सम्मको मौसम पुर्वानुमानको जानकारी मौसम पुर्वानुमान महाशाखाको वेभसाइत मार्फत… Read more »
विदेशमा रहेका नेपालीले पनि निर्वाचनमा भोट हाल्न पाउने
Posted On May 30, 2016 Author siteadmin Category प्रौद्योगिकी.
अब विदेशमा बसेर पनि नेपाल हुने आम निर्वाचनमा मत हाल्न पाइने भएको छ। सरकारले विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउने बताएको छ। संसदमा आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले विदेशमा बसेका नेपालीले पनि इलेक्ट्रोनिक मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने बताए।